Xukuumada Oo Maanta Bilowday Dhismaha 4 Km oo Waddo Laami Ah Oo Ka Mid ah Jidka Dilla Iyo Boorame | Somaliland.Org
Xukuumada Oo Maanta Bilowday Dhismaha 4 Km oo Waddo Laami Ah Oo Ka Mid ah Jidka Dilla Iyo Boorame
November 28, 2010	Hargeysa (Somaliland.org)- Maareeyahah Ha’yada Wadooyinka Somaliland C/Waaxid C/Qaadir C/Raxmaan, ayaa maanta shaaca ka qaaday inay si rasmi ah u bilaabeen afarta KM wadada u dhaxaysa Dilla iyo Boorame ee 33 Km ah ee Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland dhagax dhigay 4KM oo xukuumaddu balna qaaday inay hirgalinteeda.
C/Waaxid C/Qaadir wuxuu sheegay in Ha’yada SRA ay ka go’an tahay dayactirka jidadka waaweyn ee dalka oo uu xusay inay wax badan ka qabteen.
“Waxaan ku faraxsan nahay in aanu bilowno dhismaha wadadan laamida ah ee 4-tii KM ee dawlada cusubi balan qaaday inay hirgeliso boqolka cisho ee ugu horeeya xil haynta xukuumada. Waxaan filayaa in markaanu dhamaystirno Wadadan. Waxa kale oo aanu dayactir balaadhan xiligan ka wadnaa jidadka u dhaxeeya dilla Iyo Kala baydh,”ayuu yidhi Maareeyaha Ha’yada Wadooyinka Somaliland.
Maayarka Degmada Dilla Ibraahim Cabdi Xaaji oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay in wadadani ay meesha ka saarayso dhibaatadii ay ku qabeen Gaadiidku, waxaanu xusay inay xukuumada cusubi fulisay qeybo badan oo ka mid ah balanqaadkii ay u balan qaaday shacbiga Degmadaasi.
Jibriil Maxamed Cali, oo ka socday shirkada ADCON oo qaadatay qandaraaska dhismaha wadadan. waxaanu sheegay inay ku dhamaynayaan muddo laba bilood ah.
Dhinaca kale, waxa xafladaasi ka hadlay Guddoomiyaha Hay’ada wadooyinka Gobolada Awdal iyo Salal oo iyaguna dhawaan dhameeyay 9 Km oo ka mid ah wadadan.
Previous Post“Cawiloow Ceebta Iska Maydh Oo Ogolow Inaad Hortagto Ha’yadaha Baadhista Hantida Qaranka” UDUBNext PostXafladii Soo Dhaweenta Ee London Loogu Sameeyay Madaxweynaha Jamuuriya Somaliland	Blog